Ngalesi sesekeli seLeon3D ungaguqula iphrinta yakho ye-3D ibe nge-cutter ne-engraver | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Le nsiza oyibona ngqo esithombeni etholakala kule migqa iyinto entsha esungulwe ngabaklami nonjiniyela be I-Leon3D, isitsha esibhapathizwe ngegama lika INGONYAMA PRO3D Futhi akuyona into engaphezu kwe-laser, efakwe kuphrinta yakho ye-3D, engayenza ithole ikhono lokusebenza njengomsiki nomqophi. Akungabazeki ukuthi isesekeli ozosithanda ngokuqinisekile kusukela, ngemali encane futhi ngaphandle kokuthenga umshini omusha, ungenza iphrinta yakho yamanje ye-3D isebenze kakhulu futhi ithakazelise.
Njengoba kuphawuliwe kusuka enkampanini uqobo:
Lokhu kungenye yezethulo ezahlukahlukene kanye nezinto ezintsha esizozethula unyaka wonke, enye yezokubheja zango-2017. Inhloso yethu ukukhula futhi sifuna ukukwenza ngokwandisa uhla lwethu lwemikhiqizo, izesekeli nezinto ezisetshenziswayo ukunikela ngezindlela ezahlukahlukene zokukhetha umsebenzisi ngamunye ngokwezidingo zakhe.
I-Leon3D ithengisa isesekeli esikwazi ukuguqula iphrinta yakho ye-3D ibe yi-laser engraver ne-cutter.
Okwamanje, ngeke siyeke ukudalula imibono eza kithi evela eMnyangweni Wezobuchwepheshe waseLeon3D lapho omunye wabaphathi bawo ephawule khona:
Sizibophezele emisha nasekusebenziseni izinto ezihlukahlukene kwemishini yethu yobuchwepheshe, ngemizuzu eyi-10 nje singashintsha imishini yethu yokunyathelisa ye-3D ibe ngumsiki we-laser ne-engraver. Ngaphezu kwalokho, endaweni yokuxhasa uzothola uchungechunge lomhlanga lapho izinyathelo ezizolandelwa ukufakwa zichazwe kabanzi.
Uma unentshisekelo ngalesi sesekeli esisha seLeon3D sephrinta yakho ye-3D, akutshele ukuthi itholakale emakethe kusukela ngoFebhuwari 1, 2017 kunoma yimuphi umthengisi ogunyaziwe kanye nasesitolo sakho esiku-inthanethi. Intengo yokuthengisa, okwamanje ekhonjelwe ekwenyusweni okukhethekile kokuqaliswa, ngu- I-169,95 euro.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Ngalesi sesekeli seLeon3D ungaguqula iphrinta yakho ibe yi-cutter ne-engraver
Le yimiyalo ejwayelekile esetshenziswe ku-Raspberry Pi